Using Mi Account – Part Two (Changing email & Ph No. Information) – Xiaomi Guide
Mi Account ကို ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်တယ်။ အဲသည်မှာ Password Recovery အတွက် email ပါထည့်ထား ပေးမယ်။ Designer Account လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့် Mi Account မှာ email ပါရှိနေဖို့ လိုအပ်တာမို့ သည်ဟာ က လုပ်ထားသင့်တာပါပဲ။ email နဲ့ Account လုပ်ခဲ့လည်း Password Recovery အတွက် ရွေးစရာ Option ပိုများ အောင် ဖုန်းနံပါတ်လဲ Mi Account ထည့်ထားသင့်တာပါပဲ။ သည်တော့ Mi Account မှာ Phone နံပါတ်ထည့်တာ၊ email ထည့်တာတွေကို ဆက်ရှင်းပြပါမယ်။
Email နဲ့လုပ်ထားတဲ့ Mi Account ကို Ph no. ထည့်မယ်ဆိုရင်…
ထုံးစံအတိုင်းလုပ်ချင်တာအဆင်ပြေရအောင် Browser ကိုဖွင့်၊ account.xiaomi.com လို့ရိုက်ဝင်… ( ပုံ – ၁ )။ ကိုယ့် email address နဲ့ password ကိုထည့်ပေး ( ပုံ – ၂ )။ Recovery Phone ဆိုတဲ့နေရာက မြှားလေးကိုနှိပ် ( ပုံ – ၃ )။ အဲသည်အခါမှာတော့ မိမိ Mi Account မှာရှိတဲ့ email ကို Verify လုပ်ဖို့ code ပို့မယ်ပြောပါမယ်။ Send ပေါ့. ( ပုံ – ၄ )။
Email ကို verify code ပို့လိုက်ပါပြီ ( ပုံ – ၅ )။ အဲသည် code ကိုကြည့်ဖို့ email သွားစစ်ရပါမယ်။ အခြား ဘယ် app ကိုမှသုံးပြီး စစ်နေတာလုပ်ဖို့မလိုပါ။ Browser ထဲမှာ New Tab တစ်ခုဖွင့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ email ကို စစ်ပါမယ်။ New Tab တစ်ခုပွင့်လာဖို့ အောက်ခြေနားက Home Page ညာဖက်က Tab button လေးနှိပ်လိုက်ပါ ( ပုံ – ၆ )။ New Tab တစ်ခုပွင့်လာပါပြီ ( ပုံ – ၇ )။ Email စစ်ဖို့ Address Bar မှာ သက်ဆိုင်ရာ Email web site ကို ရိုက်ဝင်ပါ။ Gmail အတွက်ကတော့ mail.google.com ပေါ့ ( ပုံ – ၈ )။
( ပုံ – ၉ ) ( ပုံ – ၁၀ ) မှာ ကိုယ့် email နဲ့ password ထည့်ဝင်။ ( ပုံ – ၁၁ ) မှာ Xiaomi ကပို့တဲ့ mail တွေ့ပါမယ်။ ဝင်ဖတ်ရင် ( ပုံ – ၁၂ ) မှာလို verify code တွေ့မှာပါ။ မှတ်ထားပေးပါ။
ပြီးရင်တော့ verify code ပြန်ထည့်ပေးဖို့ Tab ကိုပြန်သွားပါမယ်။ Home Page Key ညာဖက်က Tab key ကိုနှိပ်ပါ။ ( ပုံ – ၁၃ )။ Code ထည့်ခိုင်းတဲ့ Tab ပြန်ရွေးပါ ( ပုံ – ၁၄ )။ Verify code ထည့်ပေးပါ ( ပုံ – ၁၅ )။ မှန်သွားရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခိုင်းတဲ့ဆီရောက်ပါပြီ။ Country code ရွေး၊ ဖုန်းပါတ်ကို 09 နဲ့မစပဲ9ကနေစထည့်၊ စာလိမ်လေးကို letter အကြီး အသေး မှန်အောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါ ( ပုံ – ၁၆ )။
ြပီးရင်တော့ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ် မှန်ကန်မှု ရှိ မရှိ verify sms ပြန်ပို့ပါမယ်။ sms ထဲမှာတွေ့တဲ့ code number ပြန်ထည့်ပေးပါ ( ပုံ – ၁၇၊ ပုံ – ၁၈ )။ မှန်ကန်သွားပြီဆိုရင်တော့ email နဲ့လုပ်ထားတဲ့ Mi Account မှာ ဖုန်းနံ ပါတ်ပါ ထည့်သွင်းပေးထားခြင်း အဆင်ပြေပါပြီ ( ပုံ – ၁၉၊ ပုံ – ၂၀ )
Phone No နဲ့လုပ်ထားတဲ့ Mi Account ကို email address ပါထည့်ထားချင်ရင်…
ထုံးစံအတိုင်းလုပ်ချင်တာအဆင်ပြေရအောင် Browser ကိုဖွင့်၊ account.xiaomi.com လို့ရိုက်ဝင်… ( ပုံ – ၁ )။ ကိုယ့် ph no နဲ့ password ကိုထည့်ပေး။ ဖုန်းနံပါတ်က Username နေရာမှာ9ကနေသာစလို့ အပြီးထိရိုက်လိုက်ပါ။ Country code ရွေးပေးဖို့ဟာ အလိုလိုပေါ်လာမှာပါ ( ပုံ – ၂ )။ Recovery email ဆိုတဲ့နေရာက မျှားလေးကိုနှိပ် လိုက်ပါ ( ပုံ – ၃ )။ ထုံးစံအတိုင်း Mi Account လုပ်ထားတဲ့ ph no ကို verify မယ်ပေါ့ ( ပုံ – ၄ )
ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ဆီ ပြန်ပို့လာမယ့် sms လေးဖတ်လို့ code ပြန်ထည့်ပေး ( ပုံ – ၅ )။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ့် email ထည့်ပေး သည့်အဆင့်သို့ရောက်ပါပြီ။ email ကိုထည့်၊ ထုံးစံအတိုင်း စာလိမ်လေးကို စာလုံး ကြီး သေး မှန်အောင် ထည့်ပေးလို့ Next ပေါ့ ( ပုံ – ၆ )။ ထုံးစံအတိုင်း email ကို verify သည်ပေါ့။ Email စစ်ဖို့ ဘာ app မှဖွင့်မနေတော့ပါ။ New Tab လေး တစ်ခုဖွင့်ပြီးပဲ စစ်ကြည့်ပါမယ်။ ( ပုံ – ၇၊ ပုံ – ၈၊ ပုံ – ၉၊ ပုံ – ၁၀၊ ပုံ – ၁၁၊ ပုံ – ၁၂ )
Code ကိုဖတ်၊ ပြန်ဖြည့်ပေးပြီး မှန်ကန်သွားပြီဆိုရင်တော့ Mi Account မှာ Email address ပါထည့်ထားတာအောင် မြင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ ( ပုံ – ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆ )
အခုဆိုရင်တော့ မိမိ Mi Account မှာ email address ထည့်ထား ပေးခြင်း အောင်မြင်ပါပြီ။ Mi Account မှာ email နဲ့ Ph No နှစ်ခုလုံးထည့်ထားခြင်းဖြင့် နောင် Password မေ့ခဲ့သည်များအတွက် Recovery ကိစ္စများ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။